ဒူဘိုင်း - အားလုံးအရာအကြီးစားပြီးတော့အသေးစား
"ဒူဘိုင်း" ဟုခေါ်သောဤကမ္ဘာကြီးထဲမှာနေရာတစ်နေရာရှိပါတယ်. "ဒူဘိုင်း" သင်၏ရှုပ်ပွနေအောင်စိတ်ကိုအပန်းဖြေဖို့နေရာ။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့များ၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှီနှင့်ရောက်ရှိရန်လိုချင်သူအများအပြားများအတွက်အောင်မြင်မှုပုံပြင်များတစ်လမ်းခဲ့ အလုပ်အကိုင်များ။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, ဒါဟာကမ္ဘာအဝှမ်းမှလှပသောခရီးသွားများအတွက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကမ္ဘာကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြီးနောက်သူသည်စကားပြော ဒီထူးခြားဆန်းပြား destination သို့လာရောက်လည်ပတ် သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို unwind ။ ဒါဟာကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ငါ့အဘို့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် 15 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီ Wonderland ထဲမှာမှော်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ဒူဘိုင်းထားတဲ့လှပသောအရာတစ်ခုခုကိုထုတ်ဖော်ပြသ ဧည့်သည်များနှင့်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်ဗဒေအချိန်လေးဖန်တီးပေးပါတယ်။
ဒူဘိုင်းအပေါ်မှာငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသက်သေခံချက်။ ငါသည်ဤတိုင်းပြည်အတွက်လူစိမ်းနဲ့တူသညျ လာ. ယခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်တူခံစားကြရသည်။ ဒါဟာတန်ဖိုးထားဖို့ငါ့မိသားစုနှင့်ပတ်သက်သောမြတ်နိုးဖွယ်အမှတ်တရများ ပေး. ချစ်ရသူကိုအတိုင်းအရှည်ထက်ကျော်လွန်ထောက်ခံမှုရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ့အားများစွာသောနည်းလမ်းတွေထဲမှာထွန်းလင်းငါ့ကိုငါ့အတွေများနေ့ရက်ကာလ၌မျှော်လင့်ပါတယ်ပေး၏ကိုဖန်ဆင်းပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်သေးနှိမ့်ချခြင်းနှင့်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့စည်းကမ်းခိုင်ခံ့သောဘုန်းတန်ခိုးကြီးအရမ်းလေးစားမိပါတယ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပျနှံခဲ့သည်။ ဒါဟာ Wonderland သို့ဒူဘိုင်းမြေယာဖန်ဆင်းတော်မူပြီသူ့လမ်းညွှန်မှုနှင့်ရူပါရုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ သူငါအတက်ကိုကွညျ့ရှုနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်တစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း, နွေးထွေးမှုနှင့်တစ်ဦးဘာသာရေးနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဧည့်သည် အတှေ့အကွုံဒူဘိုင်း၏ဂတိဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, မေးခွန်းတွေနဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်အတူဤနေရာတွင်လာရောက်လည်ပတ်ဧည့်သည်၎င်းတို့၏မျက်နှာများပေါ်တွင်ကြီးမားသောအပြုံးနှင့်အတူပြန်သေချာပါသည်။ ငါ့ကိုသငျသညျဒူဘိုင်းခံစားရစေပါစို့နဲ့ဖွင့်နှင့်အတူစတင်ပါစေ.
Burj Al Arab ဟိုတယ်
Burj Al Arab ၏တောက်ပသောအဖြူရောင်အပြင်ညဉ့်အခါပုံစံယူပါ။ စီမံချက်များနှင့်အလင်းပြပွဲအဖြစ်စိတ်ကိုဖမ်းစားကခုန်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်ပြသလျက်ရှိသည်။ Credit: Burj Al Arab Facebook က.
Burj Al Arab-အိုင်ကွန်ဟိုတယ် အာရေဗျပင်လယ်ကွေ့အပေါ်စီးသည့် Jumeirah လမ်းမပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကဆင်းငြိမ်သက်ဖို့နေရာဖြစ်ပြီး, စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမှသင့်ကိုယ်သင်သွန်။ ထို့ပြင်လောကဇိမ်ခံနှင့်ဟိုတယ်များ၏ဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသင်ကဧည့်သည်ကမ်းလှမ်းသည့်ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူမေတ္တာနှင့်ဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲစေသည်။ Jumeirah Madinat Jumeirah- သင်သည်အစဉ်အတစ်မင်းသားတစ်ခုသို့မဟုတ်မင်းသမီးများကဲ့သို့ခံစားရရန်ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်အခြားသောသူတယောက်ရာအရပ်ဖြစ်မဟုတ်ပေဒါမှမဟုတ်ငါနန်းတော်ကြောင့်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
ဟိုတယ်များ၏အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson နှင့် setting ကိုထိုကဲ့သို့သောများမှာ ဤအရပ်ဌာနကိုသွားရောက်သောဧည့်သည်မူပိုင်ခံစားရဖို့သေချာပါသည်။ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါဇိမ်ခံဟိုတယ်များကိုဆင်းစာရင်းပြုစုသူတို့ကိုအကြောင်းကိုပြောဆိုရန်ရှိပါကကများလွန်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ဟုတ်ပါတယ်ငါနှင့်ငါ့ဧည့်သည်ကွဲပြားခြားနားသောခံစားမိစေပြီဖြစ်သောအနည်းငယ်အမည်ကိုလည်းမယ်လို့ တစ်ခုအောင်မြင်သောခံစားမှုချင်းစီအချိန်ပေးပြီ သူတို့ကိုငါ Jumeirah Zabeel စာရဲ, Atlantis အဆိုပါအုန်း, Fairmont ဒူဘိုင်း, Armani ရဲ့လည်ပတ်ခဲ့ကြပါပြီ Burj Khalifa စသည်တို့စသည်တို့ကိုမှာတည်ရှိပါတယ်
ကြီးမြတ်အရသာဘူးသီးလုံးကိုအမျိုးမျိုးသောအစားအစာပင်လယ်စာခံစားနိုင်, အာရကင်, yummy အီတလီအစားအစာ, အိန္ဒိယခဲဖွယ်စားဖွယ်ချတ်, သပိတ်မှောက် appetizers နှင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်သွေးဆောင်အချိုပွဲရှိသည်သောဧည့်သည်များ ဒူဘိုင်းန်းကျင်ကွဲပြားခြားနားသောစားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ။ ဧည့်သည်ကသူတို့ဝစွာမှအစာစားခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏လကျြအစာအိမ်တံဆိပ်ခတ်ထားရန် luscious အစားအစာသဘောကျနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအများအပြားအကြိုက်ဆုံးစားသောက်ဆိုင်ရှိ ဒါပေမယ့်ငါ့နှလုံးအပေါ်တစ်ဦးအမှတ်ရစရာစှဲလှပတဲ့ပင်လယ်အပေါ်စီးဆိပ်ခံတံတားပေါ် Pierchic တည်ရှိသည်အလောင်းတော်ထားသည့်အနည်းငယ်အမည်ကိုဖို့အေးမြလေပြေသင့်ရဲ့ဆံပင်, Jumeirah Zabeel စာရဲတည်ရှိသည် Amla စားသောက်ဆိုင် caresses နေချိန်မှာသင့်ရဲ့အစားအစာကိုပျော်မွေ့စေသည် အိန္ဒိယကအိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုနှင့်အရသာတစ်ခုစစ်မှန်ခံစားမှုပေးသည်အယ်လ် Mahara ပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင် - Burj Al Arab တည်ရှိပြီးပင်လယ်သတ္တဝါများ၏ဂုဏ်အသရေကြည့်နေစဉ်သင်အရသာကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီမှာသေးစူးစမ်းဖို့အများကြီးလှပသောသောနေရာများဖြစ်ကြသည်ပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီစားသောက်ဆိုင်ဟာဧည့်သည်တစ်ဦးပေးသောမြတ်နိုးမှ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက်မှတ်ဟင်းလျာများ, လေထု, ဝန်ဆောင်မှုများ sequence ကိုနှင့်ဘုန်းရှိပါတယ် wow အတွေ့အကြုံကို နှင့်၎င်းတို့၏မှတ်ဉာဏ်လမ်းသွားမှထပ်ပြောသည်။
ဒူဘိုင်း Spa နှင့်သုခချမ်းသာစင်တာများ
ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုနှင့်ချစ်ခြင်းယုံကြည်သူများသည် သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ဖြစ်လျက်ရှိလိုက်မယ်မှအလွယ်တကူကွဲပြားခြားနားသော Spa ရဲ့လွတ်မြောက်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, သုခချမ်းသာ ဒူဘိုင်းတွင်တည်ရှိသည်စင်တာများ အနည်းငယ်အဆိုပါ Moksha အဘိဓါန် Spa, Talise Spa အဖြစ်, ရရှိနိုင်အထူးကုသမှု၏ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူ Armani ရဲ့ Spa စသည်တို့အမည်ကိုပါလိမ့်မယ် သူတို့ရဲ့ခံစားချက်အညီဧည့်သည်မှထောက်ပံ့ပေးသည်။ သူတို့ရဲ့ကုသမှုပြီးနောက်အကယ်စင်စစ်ဧည့်သည်လာပါခံစားရနှင့်သူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလုံးဝအတွင်းရှိငြိမ်းချမ်းစွာခံစားချက်မှမိမိတို့ကိုယ်ကိုစှနျ့။
သူတို့အလိုရှိကြသည်တွင်အရာအားလုံးကိုရှာတှေ့နိုငျအဖြစ်စျေးဝယ်စွဲ Ladies နှင့်မိန်းကလေးများရောငျ့ရဲနိုငျမညျမဟုတျ ဤနေရာတွင်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂြိုလ်ပေါ်။ ဥပမာ, ဥယျာဉ်အလှဆင်ဖို့အဝတ်အစားတွေ, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပစ္စည်းများ, အိမ်အလှဆင်, ကျန်းမာအစားအစာများ, အစားအသောက်ဆိုင် branded ။ လူကြီးလူကောင်း အဆိုပါစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မောလ်များရရှိနိုင်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေအတူတက်နှင့်ချိတ်ဆက်ဖို့သေချာ ကား အကောင်းဆုံးပြိုင်ကားကားများနှင့်အတူအရောင်းပြခန်းဧကန်အမှန်အရူးနှင်ထုတ်မည်ဖြစ်သည်။
ကလေးများ & ဧည့်သည်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှား, စွန့်စားမှုများနှင့်အပန်းဖြေခစျြတဲ့သူ ဒူဘိုင်းသို့သွားရောက်ဖို့အများကြီးဆွဲဆောင်မှုရှိ နှင့်သွားကြဖို့ထိုကဲ့သို့သောဒူဘိုင်းဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ, ကန္တာရ Safari ကအဖြစ်သောနေရာများ, ဒူဘိုင်း Creek အဘိဓါန်, ဒူဘိုင်းပြတိုက်နှင့် Jumeirah ဗလီ, အဆိုပါ Glow ဥယျာဉ်နှင့်များစွာသောပိုပြီးနှင့်အတူ Mesmerize ရ။
ဒီနေရာမှာလာသူကိုကလေးတွေကသူတို့ထဲကတစ်ဦးခံစားချက်ခဲ့ရှိသည်ဖို့သေချာ Wonderland ထဲမှာအဲလစ်အတွက် နှင့်မြောက်မြားစွာစွန့်စားမှုနှင့်အတူလန့လိမ့်မည် အဆိုပါပျော်စရာမြို့ကဲ့သို့အများအပြားသောအရပ်တို့ကိုမရရှိနိုင်, အဆိုပါလင်းပိုင်ငါးပြတိုက်, Kidzenia, The Magic Planet ကို, Legoland, အဆိုပါ IMG ကမ္ဘာ့ဖလား, Aqua အကျိုးတူ waterparks, ဧကန်အမှန်အလုပ်များနှင့်အံ့သြသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့သွားမယ့်တောရိုင်း Wadi ရေပန်းခြံများ သူတို့ကကွဲပြားခြားနားသောနေရာများသို့သွားရောက်အဖြစ်သူတို့ကိုအစဉ်အမြဲရှိနေခံစားမိစေပါလိမ့်မယ်.
ဒူဘိုင်းကိုလည်းများစွာသောနှင့်လေ့ကျင့်ရေးမြေပြင်များအတွက်လမ်းညွှန်နှင့်ဆရာအကြိုက်ဆုံးစီးပွားဖြစ်အချက်အချာဖြစ်ခဲ့သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများရှာသို့ရောက်လာသောသူအပေါင်းတို့အဘို့။ သူသူရဲကောင်းမှစည်းစိမ်ဥစ္စာမှစုတ်အတော်များများပုံပြင်များ, သုညရှိပါတယ် သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေ့ရှိခဲ့နှင့်၎င်းတို့၏အိပ်မက်အောင်မြင် ဤပြည်၌ရည်မှန်းချက်။
အဆိုပါလှေကားတိုးချဲ့ အဆိုပါအသစ်ရောက်ရှိလာသောနှင့်စိန်ခေါ်မှုရှာဖွေနေသူမှ သူတို့ရဲ့အသိပညာနက်ရှိုင်းနှင့်ကြယ်များကဲ့သို့ထွန်းလင်းဖို့သူတို့ကို polishing အားဖြင့်များစွာသောအမြစ်တွယ်ခဲ့သည်။
ငါအနည်းဆုံးနောက်ဆုံးသော်လည်းမအားလုံး ပြောဒူဘိုင်းဖြစ်ပါသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလှတရား, ယဉ်ကျေးမှုနှင့် Fancy ကျော်လွန်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူတစ်ဦးမှော်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒူဘိုင်းတတ်သူတစ်ခုခုရှိပြီးနောက်တဖန်သွားရောက်သည့်အခါဤအရပ်တိုင်းရှုထောင့်၌ရှိသောထပ်ခါတလဲလဲဧည့်လန်းစပြုပြီစောင့်ရှောက် အတှေ့အကွုံမှကွဲပြားခြားနားသော။ ဒူဘိုင်းကဒီမှာကုန်တစ်ဦးချင်းစီသည်ယခုအချိန်တွင်အတွက်မမေ့နိုင်သောအမှတ်တရများကိုဖန်တီးရန်နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်း & စိတ်ဒူဘိုင်း Love။ ငါ့ကိုကဗျာတစ်ပုဒ်အတူကကောက်ချက်ချကြပါစို့။
ဤနေရာတွင်ကလေးများ, မိသားစု, စုံတွဲများနှင့်အကွီးအကဲမြား
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ, ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် ယခုကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများပေး။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးဘို့လမ်းပြပေးခြင်းနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသင်အခုလမ်းညွှန်များရနိုငျသညျ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။